Nhau - Mid-Autumn Conversazione YeKoreji Mudzidzi mu2020
Musi waSeptember 29, 2020 Jitai Electronics Co, Ltd yakabata Mid-Autumn Coversazione yemudzidzi wepakoreji mu2020 iyo ndeimwe yematanho akanaka mukambani yangu uye inopa mukana wekuzvikurira ivo vanongopinda kambani. Zvichakadaro zvakare chikuva chekuti munhu wese azvibate (iye). Vadzidzi makumi mana vatsva vekoreji vanobva kumadhipatimendi akasiyana vakapinda muMid-Autumn Conversazione
Zvemukati memusangano uyu ndezvemifungo kubva kuna Jack Ma, muvambi weAlibaba "emotion quotient, intelligence quotient, rufaro quotient" uye "mafungiro anosarudza ramangwana" "mamiriro anosarudza magumo". Vadzidzi vekoreji vari mukambani medu vanoita chirevo zvichibva pakunzwisisa kwavo.
Vapindi muhurukuro yekutaura vakazvitora zvakanyanya uye vakaita gadziriro izere kunyanya vamwe vechidiki vadzidzi vekoreji uye vakataura yake (yake) yake pfungwa neushingi. Zvese zvirevo zvakange zvaongororwa nekambani kungoita seimwe hwaro hwekugoverwa kwemabasa, kukwidziridzwa kwemihoro, kusarudzwa kwepamberi uye kugona kugona.
Pedyo nekupera kwekutaura, Jun Ma, sachigaro wekambani yedu akaita mhedziso yekuti situtation yemisika yekunze mu2020 yakanga iri pasi pekunaka, kuwanda kwehuwandu kwaive kwakakwana, asi kambani yedu yakaremedza mabasa akaoma uye yakatarisana nematambudziko akawanda nematambudziko saka ini ndaishuvira vese vashandi vekare uye vadzidzi vepakoreji nyowani vakaramba vachiridza matarenda enyu uye kushandisa ruzivo uye ruzivo neinthusatism yakazara yebasa uye vachiri kukurudzira maitiro ekushanda anoshanda kutora nyaya dzine minzwa uye kunamatira kuchinangwa chako uye usarega kuenda kunowedzera kuzadzisa chinangwa chekugadzira yekambani yedu mu2020 nekuedza uye kunetsekana. Panguva imwecheteyo ini ndinoshuvira kuti mose muve nezororo rakanaka uye nemhuri inofara. Pakupedzisira Anotarisira kuti munhu wese anokwanisa kufambira mberi nekusimudzira mukambani.
Kubudikidza neiyi hurukuro, kwete chete kune vechidiki vadzidzi vekoreji kuti vaongororane, kusimudzira manzwiro emumwe pachikuva, asi zvakare kuwedzera kuvimba kwavo uye kutsunga kutora midzi mukambani.